स्वास्थ्य पेजकोइलाको प्रयोग गरेर आगो ताप्दा कसरी निसास्सियर मृत्यु हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज कोइलाको प्रयोग गरेर आगो ताप्दा कसरी निसास्सियर मृत्यु हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज
१६ असार २०७९, बिहीबार। 2022/06/30
कोइलाको प्रयोग गरेर आगो ताप्दा कसरी निसास्सियर मृत्यु हुन्छ ?
जाडोयाम छ । मौसम चिसो भएकाले मानिसहरु यतिबेला न्यानो हुन खोज्छन् । हुने खानेहरुले कोठामा हिटरको प्रयोग गर्छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर विपन्न समुदायले कोइला बालेर आगो तापेर चिसो छल्ने प्रयास गर्छन् ।
तर हिटर र कोइलाको प्रयोग सहि तरिकाले गर्न नजान्दा मान्छेको ज्यानै समेत गइरहेको छ । बुधवारराती नेपालगन्जमा त्यस्तै घटना भयो । कर्णाली प्रदेशको खरिद तथा आपूर्ति शाखा (मेडिकल स्टोर) नेपालगन्जमा कार्यरत धनप्रसाद भट्टराईसँगै उहाँका थप तीन सदस्यको कोइलाको धुवाँबाट निसास्सियर मृत्युभयो ।
श्रीमति, छोरा र भाई अस्पतालको शैयामा छन् ।
साँझको खाना खाएर भट्टराई परिवारले टिनको बट्टामा कोइला सल्काए । झ्याल ढोका सबै बन्द थियो । कोइलाको रापले कोठा न्यानो हुँदै गयो । उनीहरु सबै निद्रामा लठ्दिै गए । कोठामा अक्सिजनको मात्रा घट्दै गयो । अन्ततः उनीहरु सबै अचेत भए ।
विहान अवेरसम्म पनि कोठाको ढोका खुलेन् । अरु कर्मचारीले हतार–हतार प्रहरीलाई खवर गरे । तत्काल उद्दार गरेर भेरी अस्पतालमा लगियो । तर धनप्रसादसँगै उहाँका तीन महिने छोरा, ४५ वर्षीया आमा र २७ वर्षीया दिदीले मृत्युवरण गरिसकेको चिकित्सकले घोषणा गरे ।
जाडो छल्न प्रयोग गरिने कोइला, हिटरले कसरी मृत्युसम्म पु¥याउँछ ? उसो भए हिटर र कोइला प्रयोग नै नगर्ने त ? यसै सन्दर्भमा प्रियास्मृति ढकालले भेरी अस्पतालका मेडिसिन विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
आगो ताप्दा प्रयोग गरिने कोइलाबाट निस्कने धुँवाबाट मानिस कसरी मृत्युको मुखमा पुग्छन् ?
जाडोयाम सुरु भएसँगै आगो ताप्न प्रयोग गरिने कोइलाबाट वर्सेनि मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको खवरहरु आइरहन्छन् । पछिल्लो पटक नेपालगन्जमा भएको घटना पनि एक हो ।
जाडोमा चिसो कतैबाट नछिरोस् भन्नका लागि सबै झ्याल ढोका बन्द गर्ने चलन छ । मान्छेलाई श्वासप्रश्वासका लागि अक्सिजन चाहिन्छ । कोइला जल्न पनि अक्सिजन चाहिन्छ ।
अक्सिजनको सहायताबाट बल्दै गरेको कोइलाबाट कार्वनमोनोअक्साइड उत्पादन गर्छ । उक्त कार्वनमोनोअक्साइड शरिरमा हुने रातो रक्त कोषिकाको रगतमा टाँसिन्छ । अक्सिजन सप्लाई गर्ने मुलिकुलमा सामान्य अक्सिजन टाँसिने दर र कार्वनमोनोअक्साइड टाँसिने दर दुई देखि दुई सय ३० गुणा बढी हुन्छ । यो त्यति कडा तरिकाले टाँसिन पुग्छ ।
यसरी टाँसिदा जुन ठाउँमा अक्सिजन जानु पर्ने हो त्यहाँ जान पाउँदैन् । त्यसपछि मानिसको मृत्यु हुन पुग्छ ।
यस्तो बेलामा मानिसलाई शारिरीक असहजता हुदैन् ?
पक्कैपनि हुन्छ । सुरुमा टाउँको दुख्ने, चक्कर लागे झै हुन्छ । लठ्ठ हुने गर्छ र अन्तमा मृत्यु हुन्छ । तर यस्ता घटना प्रायः राती हुने गरेका छन् ।
रातीको समयमा यसैपनि मानिसहरु निद्रामा ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । दिउँसो भए झ्याल ढोका खोल्ने, मानिसहरु निस्कने हुन्छ । तर रातीको समयमा सबै बन्द गरिएको हुन्छ ।
कोइलाबाट निस्केको धुवाँका कारण निसास्सियर मृत्यु भएका अधिकांश घटना रातीका छन् । रातीमा निदाएको होला भन्ने हुन्छ ।
होसमा भएको व्यक्तिपनि त्यतिबेला उद्दार गर्ने अवस्थामा हुदैनन् । त्यसले गर्दा राती बढी जोखिम देखिन्छ ।
गाउँघर भन्दा शहर बजारमै यस्ता घटना बढी भएको सुनिन्छ र देखिन्छ पनि किन ?
गाउँमा पनि यस्ता घटनाहरु हुन्छन् । गाउँघरका घरमा कतै न कतै छिद्र, प्वाल, झ्याल हुन्छन् । र, अक्सिजन आउने ठाउँ रहन्छ ।
शहरमा झयाल ढोका लगाउने हो भने अक्सिजन आउने ठाउँ नै हुँदैन् ।
बुझेकै मानिसका घरमा यस्ता घटना भएका छन् । कोइलामात्र होइन इलेक्ट्रिक हिटरपनि लामो समय बालिरह्यो भने समस्या हुन सक्छ । झयाल ढोका पुरै बन्द गरेर भित्र कोइला बाल्ने र इलेक्ट्रिक हिटर प्रयोग गरियो भने यस्ता घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।
हिटर र कोइलाको प्रयोग कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ ?
यदी झ्याल ढोका खुला छ भने केही समयको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नत्र प्रयोग गर्नु भनेको मृत्युकै मुखमा पुग्नु हो । साँझ सुत्दाखेरी एकछिन प्रयोग गरेपनि निदाउनु भन्दा पहिले बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिदैन भने प्रयोेग नै नगरौं ।
झयाल ढोका बन्द गरेर आगो ताप्दै गरेका कतिपय मानिसहरु मेरो त अक्सिजन लेभल ठिकै छ, धुवाँले असर गरेको छैन् भनेर अक्सोमिटरबाट अक्सिजन लेभल हेर्दै आगो ताप्ने पनि गरेको देखिन्छ ? यो कति भरपर्दो हो ?
एकदम सहि प्रश्न गर्नुभयो । त्यो पूर्णतयाः गलत छ । कोभिड महामारीमा हामीले जुन नर्मल पल्स अक्सोमिटर प्रयोग गरेर अक्सिजन लेभल हेथ्र्यो त्यसले यसमा काम गर्दैन् ।
कोइलाबाट निस्केको कावर्नमोनोअक्साइडले रगतमा अक्सिजन लेभल कम गराउँदै लगेपनि पल्स अक्सोमिटरले नर्मलनै देखाउन सक्छ । त्यसैले पल्स अक्सोमिटरको भर पर्नु हुँदैन् ।
निसास्सियर बाँचेका विरामी पूर्णरुपमा स्वस्थ रहन्छन् ?
नरहन पनि सक्छन् । उनीहरुमा छटपटी हुने, हातहरु काम्नेलगायतका समस्या देखिन सक्छन् । कसैलाई चक्कर लाग्ने पनि हुन्छ । मानसिक समस्याको जोखिम पनि रहन्छ ।
चिसो छल्ने उपयुक्त विकल्प के हो ?
सकेसम्म घरबाहिर निस्कनु हुदैन् । निस्केपनि शरिर छोप्ने कपडा लगाउनु पर्छ । घरमा बस्दा पनि न्यानो हुने कपडा लगाउने । तातो पानी पिउने । तर चिसो छल्ने नाममा कोइला बाल्ने, हिटर बाल्ने चाही राम्रो होइन् ।
१५ पुष २०७८, बिहीबार प्रकाशित
कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्यो, दुई सातामै चार गुणा बढ्यो
डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित
‘गर्भावस्थामा थाइराइड भए गर्भको शिशु अशक्त हुनसक्छ’
कौशिल्या अस्पतालमा ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको निःशूल्क सुगर जाँच, अन्य जाँचमा २० प्रतिशत छुट !